Syria: miha-maro ireo lasibatry ny famoretana antserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2019 3:36 GMT
Manambara ny tatitra vaovao navoakan'ny Human Rights Watch fa olona roa no nogadraina mangina any amin'ny toerana tsy fantatra ao Syria. Nosamborin'ny Sampam-pitsikilovana miaramila Syriana tamin'ny volana jona 2007 i Karim ‘Arbaji (29 taona) sy Tarek Biasi (22 taona) noho ny fanehoan-kevitra antserasera mitsikera ny governemanta Syriana. Olona iray fahatelo, Ali Zein al-‘Abideen Mej'an, ihany koa nosamborina noho ny famoahana fanehoan-kevitra an-tserasera manohitra an'i Arabia Saodita, nomelohin'ny Fitsarana Ambony misahana ny Fiarovam-pirenena higadra roa taona an-tranomaizina izy tamin'ny 23 septambra.
Tamin'ny 7 Jona, nisambotra an'i Karim ‘Arbaji, 29 taona ny sampam-pitsikilovana miaramila ao Mantaqa noho izy voalaza fa mandrindra ny , www.akhawia.net, seha-pifanakalozan-kevitra malaza amin'ny aterineto ho an'ny tanora Syriana miresaka politika sy sosialy. Nilaza tamin'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona ireo olona zatra ny raharaha fa mety nafindran'ny sampana Mantaqa tany amin'ny Sampana Palestina any Damaskosy izy, saingy tsy nanome fampahafantarana ofisialy momba ny toerana misy an'i Arbaji ny manampahefana.
Tamin'ny 30 Jona 2007, nisambotra an'i Tarek Biasi, 22 taona ny Sampam-pitsikilovana Miaramila tao amin'ny tanàna amoron-dranomasina Tartous, satria “niditra aterineto izy ary nanevateva ny sampan-draharahan'ny fiarovana”, araka ny filazan'ny olona zatra ny raharaha. Mbola any amin'ny fonja miafina i Biasi, tsy fantatra ny toerana misy azy.
Tamin'ny 23 septambra, nomelohin'ny Fitsarana Faratampony misahana ny Fiarovam-panjakana higadra roa taona an-tranomaizina i Ali Zein al-‘Abideen Mej'an noho ny “fanaovana hetsika na lahatsoratra na lahateny tsy nahazoana alalana avy amin'ny governemanta … ary manimba ny fifamatorany amin'ny firenena vahiny” satria namoaka fanehoan-kevitra manohitra an'i Arabia Saodita tamin'ny aterineto izy.
Nanameloka ny famerana ny fahalalahana miteny antserasera ny HRW ary niantso an'i Syria mba hamotsotra ireo gadra sy hilaza ny toerana misy azy ireo.
Tamin'ny 15 Oktobra 2006, nosamborina sy nohadihadian'ny mpitandro ny filaminana misahana ny heloka bevava ao amin'ny firenena ilay Syriana bliaogera sady renim-pianakaviana manan-janaka telo, Roukana Hamour, izay nibilaogy ny zava-niainany tamin'ny rafi-pitsarana Syriana, mampiseho ny kolikolim-panjakana sy ny an'ny banky ary ny an'ny fitsarana. Niharan'ny fanorisorenana sy fandrahonana mitohy hatrany avy amin'ny polisy manao fanamiana sivily i Roukana.
Ilay bilaogera Roukana Hamour nalaina tao an-tranony ary notarihina teny amin'ny araben'ny tanànany, rehefa norahonan'ireo mpitandro ny filaminana momba ny Heloka bevava ao amin'ny firenena. (Loharano: Bilaogin'i Roukana)
Tamin'ny 28 aprily 2007, navotsotr'i Syria ilay mpikatroka antserasera Ibrahim Zoro, izay nosamborina tamin'ny 5 aprily. Mbola any am-ponja ireo mpikatroka roa hafa, Muhened Abdulrahman mpanao gazety sy ilay mpanoratra Habib Saleh. noho ny hetsika antserasera izay heverin'ny manampahefana Syriana fa mampiady.
Vao haingana ny Ministeran'ny fifandraisandavitra sy ny Teknolojia vao natsangana no namoaka torolalana mangataka amin'ireo tompona tranonkala Syriana “mba hampihatra ny marina sy ny tsy fitanilàna (…) ary hamoaka amin'ny fomba mazava sy amin'ny antsipirihany ny anaran'ny mpanoratra lahatsoratra sy izay maneho hevitra amin'izany. ” Nampian'ny Minisitera koa fa “mety hitarika amin'ny fampitandremana ny tompon'ny tranonkala ny tsy fanaovana izany ary hahatonga ny tranokalany ho tsy azo idirana mandritra ny fotoana voafetra. Raha toa ka mbola miverina ny tsy fanajana, dia hikatona maharitra ny tranonkala”